बलिउडका कलाकारलाई टक्कर दिए नेपाली युवतीहरुले, हेर्नुहोस दमदार डान्स ! (भिडियो)
काठमाडौ -बलिउडकी चर्चित गायिका नेहा कक्कर अहिलेका निकै चर्चित गायिका हुन । उनको गीत भारतमा मात्र नभैइ धेरै देशहरुमा एक पछि अर्को गर्दै निकै हिट हुने गर्छन् । उनी ईन्डिएन आईडलबाट उदाएकी गायिका हुन ।
निकै मीठो स्वरकी धनी गायिका नेहा कक्कर गीत मात्रै गाउदैनन उनी नाच्नमा पनि उत्तिकै अब्बल छिन। उनी आफ्नो गीत देखि अन्य गायक गायिकाको गीतमा समेत बबाल डान्स गर्छिन। नेहा काकारले डान्स गरेको उनको गीत ” साम्भा” एल्बमको “आख मारे” गीत बलिउड लगायत विश्व भरिनै हिट भयो ।
यस्तो थियोे नेहाकाे सांगीतिक यात्रा ?
तेसैको नक्कल नेपाली युबा डान्सर हरुले पनि गर्ने गरेका उदाहरण छ्न। नेपाली युबा पुस्तामा कुनै गीतको डान्स कभर गर्ने लहड भने पहिल्यै देखि चली आएको थियो । यस्तै कभर डान्स गर्दा गर्दै धेरै डान्स क्षेत्रमै स्थापित पनि छ ।
नेपाली युबा पुस्ताको यहि लहड पछ्याउँदै एअ के मिडिया ग्रुपले पनि भारतिय कलाकार नेहा काकारको चर्चित गीत छम्मा छम्मा गीतमा कभर डान्स गरेका छन। डान्स निकै दमदार छ। नेपाली युबा पुस्तामा यतिको डान्स हुनु भनेको निकै उपलब्धि पुर्ण हो।
* काठमाडौ -बलिउडकी चर्चित गायिका नेहा कक्कर अहिलेका निकै चर्चित गायिका हुन । उनको गीत भारतमा मात्र नभैइ धेरै देशहरुमा एक पछि अर्को गर्दै निकै हिट हुने गर्छन् । उनी ईन्डिएन आईडलबाट उदाएकी गायिका हुन ।
हेर्नुहोस नेपाली युवायुबतिको दमदार डान्स भिडियो ।